Ka Hor Cayaarta Tottenham, Lionel Messi Oo Tilmaamay Halka Ay Barcelona Uga Timid Dhibaatada Heshay Labadii Ciyaarood Ee U Dambeeyey | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ka Hor Cayaarta Tottenham, Lionel Messi Oo Tilmaamay Halka Ay Barcelona Uga Timid Dhibaatada Heshay Labadii Ciyaarood Ee U Dambeeyey
(30-9-2018) Kaddib markii ay Barcelona lumisay laba dhibcood ciyaartii Athletic Bilabo oo ay barbar-dhac 1-1 ah ku kala baxeen, iyo guul-darradii uga sii horreysay ee toddobaadkii hore ay kala kulmeen Girona iyagoo jooga garoonkooda Camp Nou, waxa bannaanka soo dhigay halka ay dhibaatadu ka jirto, kabtanka kooxda Lionel Messi.
Messi oo kursiga kaydka la geliyey ciyaartii Bilbao, laakiin soo galay qaybtii dambe ayaa ay kamaraduhu qabteen isaga oo xanaaqsan oo muujinaya masuuliyad weyn oo saaran.
Isaga oo warbaahinta la hadlayey ciyaarta kaddib, waxa uu Lionel Messi tilmaamay in aanu jirin walaac weyn oo haysta kooxdiisa iyo isagaba, hase yeeshee ay jirto dhibaato ka haysata dhinaca difaaca oo ay tahay inay horumar ka sameeyaan.
“Ma jiro wax walaac ah, sababtoo ah xili ciyaareedku waa bilow, sannad dheer ayaana naga horreeya. Maanaan filaynin natiijooyinkan u dambeeyey, laakiin ciyaartan, waxa aanu abuurnay xaalado aanu ku guuleysano, balse maanaan umaanaan maamulin siday ahayd. Waa inaanu xoojino difaaca, waxa aanu kasoo baxnay sannad adag, haddana waa inaanu yarayno goolasha naga dhalanaya.” Sidaas ayuu yidhi Messi.
Barcelona ayaa isku diyaarinaysa kulan adag oo ka tirsan Champions League oo ay Salaasada ugu safrayso magaalada London oo ay garoonka Wembley kula soo ciyaarayso Tottenham.